कप्तानको ८ खेलमा १ विकेट- क्रिकेट विश्वकप - २०१९ - कान्तिपुर समाचार
कप्तानको ८ खेलमा १ विकेट
असार २५, २०७६ एएफपी
ढाका — बंगलादेशका कप्तान मासरफ मोर्ताजाले समर्थकको शिर झुकाउनुपरेकोमा आफूलाई पछुतो रहेको जनाउँदै विश्वकपको सेमिफाइनलमा नपुगेकामा जिम्मेवारी लिने जनाएका छन् ।
‘हामी निश्चय पनि निराश छौं, केही नतिजा हाम्रोतर्फ आएको भए सेमिफाइनल पुग्न सक्थ्यौं,’ टिम ढाका फर्किएपछि मोर्ताजाले पत्रकारसँग भने, ‘समग्रमा हामीले जसरी खेल्यौं त्यो निकै सकारात्मक थियो । तर हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेनौं । हामीले अन्तिम खेल जितेको भए पाँचौं हुन्थ्यौं । हाम्रा समर्थक र खेलाडी शीर्ष चारमा हेर्न चाहिरहेका थिए ।’
लिगको अन्तिम खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेपछि बंगलादेश आठौं स्थानमा झरेको थियो । बंगलादेशले दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तानलाई पराजित गरेको थियो भने केही शीर्ष टोलीसँग झिनो अन्तरले पराजित भए पनि दोस्रो अन्तिम खेलअघिसम्म शीर्ष चारको दौडमा रहेको थियो । छिमेकीहरू भारत र पाकिस्तानसँग पराजित भएपछि टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।
केही खेलाडीको एकरुप प्रदर्शन नहुनु, केहीमा भाग्यको साथ नहुनु टोली बाहिरिनुका कारण रहेको मोर्ताजाले जनाए । ‘भारतसँगको सेमिफाइनल खेलअघिसम्म हामीसँग सेमिफाइनल ढोका खुला थियो । सकिब अल हसन र मुस्फिकर रहिमबाहेक अरुले संयमित प्रदर्शन देखाउन सकेनन्,’ मोहम्मद सैफुद्दिनले असाधारण क्रिकेट खेलेको जनाउँदै मोर्ताजाले भने, ‘एक साता वर्षाले पूरै बिथोलियो, जसले हाम्रो र अरु टोलीलाई प्रभावित बनायो ।’
सकिबले विश्वकपमा ६ सय ६ रन बनाउनुका साथै ११ विकेट लिए । तीव्र गतिका बलर मुस्ताफिजुर रहमान बंगलादेशका अर्का उच्च प्रदर्शनकर्ता थिए । उनले २० विकेट लिए । मोर्ताजा आफैं पनि फर्मसँग संघर्षरत थिए । उनले ८ खेलमा १ विकेटमात्र लिनसके । ३५ वर्षे मध्यम गतिका बलर मोर्ताजाले आफ्नो भविष्यबारे स्पष्ट केही बताएनन् । ‘एउटा कप्तानबारे आशा गरिएको नतिजा निकाल्न नसकेमा मैले नेतृत्व गर्न नसकेको हो, त्यसपछि त्यहाँ आलोचना भइहाल्छ । मैले पूरै टोलीको जिम्मा लिनुपर्छ, यो सामान्य नै हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३८
बदलिएका प्लुङ्केट र इंग्ल्यान्ड
बर्मिङघम — लिएम प्लुङ्केटले विश्वकपको बहुप्रतीक्षित सेमिफाइनल खेलअगाडि अस्ट्रेलियालाई चेतावनी दिँदै इंग्ल्यान्ड विगतभन्दा फरक टोली रहेको जनाएका छन् । एसेस प्रतिद्वन्द्वीहरू बिहीबार फाइनल भेटका लागि बर्मिङघममा भिड्दै छन् । साविक विजेता अस्ट्रेलिया छैटौं पटक उपाधि हत्याउने प्रयासमा छ भने इंग्ल्यान्ड पहिलो पटक उपाधि उचाल्ने आसमा छ ।
अनुभवी हिसाबमा अस्ट्रेलिया प्रतियोगिताको बलियो देखिन्छ । विश्वकपमा इंग्ल्यान्डसँग भएका पछिल्ला चार भेटमा सबैमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको थियो । यसै प्रतियोगिताको समूह चरणमा पनि अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो । तर प्लुङकेट समय परिवर्तन भइसकेको मान्छन् ।
‘उनीहरूले यसअघिको भेटमा सबैमा सफलता हात पारेका छन् तर यस्तो प्रतिभाशाली खेलाडीको टोलीसँग होइन,’ प्लुङकेटले भने, ‘पछिल्ला भेटहरूभन्दा हामी धेरै फरक टोली हौं । हामीले पछिल्लो चार वर्षदेखि निकै राम्रो खेलिरहेका छौं, विश्व नम्बर एक टोली बन्यौं । त्यसमा आनन्द महसुस गर्छौं । हाम्रो दिनमा कुनै पनि टोलीलाई पराजित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’
प्लुङकेट इंग्ल्यान्ड टोलीका सबैभन्दा पाका खेलाडी हुन् । सन् २००५ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आएका उनले आफ्नो पछिल्लो विश्वकप अनुभव १२ वर्षअघि वेस्ट इन्डिजमा बटुलेका थिए । उनले इंग्ल्यान्डको एकदिवसीय टोलीमा आएको उतारचढाव देखेका छन् । उनी अहिले जस्तो लयमा यसअघि कहिले थिएनन् ।
‘हामीसँग यसअघि पनि उत्कृष्ट खेलाडी थिए तर विश्वकप जितिन्छ भन्ने कहिल्यै कल्पना आएन,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो उत्साहित टोली छ । मैले यसअघि खेलेका टोलीबाट जित आस राखिन्न थियो । अहिले हामीसँग जुन टोली छ, त्यसबाट सर्वसाधारणले खेलमा विजय र शृंखला जितको आशा गर्छन् । चार वर्षपछि यो स्थितिमा आउनु निकै राम्रो हो । अब यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’
३४ वर्षे प्लुङकेटले २०२३ मा भारतमा हुने विश्वकपमा खेल्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले अबको केही दिन उनको खेलजीवनको उच्च क्षण हुनसक्छ । ‘मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ,’ उनले सहमति जनाउँदै भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले अर्को विश्वकप खेल्ने सम्भावना नै छैन, त्यसैले अहिलेको क्षण ठूलो छ ।’
प्रकाशित : असार २५, २०७६ ०९:५५
एनआरएनएको भावी नेतृत्व कस्तो छान्ने ?
डा. अंगराज तिमिल्सिना आश्विन २८, २०७६
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को चुनावी माहोलले काठमाडौं तताएको छ । करीब १६ वर्षको इतिहास बोकेको यो संस्था अरु देशका आप्रवासी संस्थाको तुलनामा कलिलो संगठन...
आवश्यक छ गुठी कानुन
जगत देउजा आश्विन २८, २०७६
सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको ४ महिना भएको छ । विधेयकमा सामान्य छलफल भई संशोधन प्रस्तावसमेत पेस भएको थियो । उपत्यकाका गुठियारले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सडक...
सडक कि रेल ?
सुजित मैनाली आश्विन २८, २०७६
दुईदिने नेपाल भ्रमण सिध्याएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्किएसँगै नेपाल–चीन सहकार्यको प्रारूप अब कस्तो हुनेछ भन्ने अझ स्पष्ट भएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा शिक्षादेखि व्यापारसम्मका...
सरिता तिवारी आश्विन २८, २०७६
‘स बैभन्दा पहिलो रूपान्तरण, पहिलो क्रान्ति आफूविरुद्ध गरौं । आफैंविरुद्ध निर्मम र कठोर बनौं । सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्भव छ ।’
चिकित्साशास्त्रको शुल्क समस्या
सम्पादकीय आश्विन २८, २०७६
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीसित असुलेको अतिरिक्त शुल्क अझै फिर्ता गरेका छैनन् । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने २०७५...
‘रणनीतिक साझेदारी मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’
कान्तिपुर संवाददाता आश्विन २८, २०७६
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा कोसेढुंगा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार चीनले आपसी मैत्रीलाई अब ‘रणनीतिक साझेदारी’...